Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Västerbottens län / Vindeln
Degmada Vindeln waxaa dagan ku dhawad 5 400 oo qof, halkaan sii fiican ayaa uga helnay. Degmada waxeey sii fiican ugu haboon tahay qooyska caruurta leh, waxaana uu shaqeeyna jawi shirkadeed oo fiican dartiis oo leh koncsin.
2,847 kiilomitir oo laba jibaaran
Umeå 56 kiilomitir
Skellefteå 113 kiilomitir
Sundsvall 305 kiilomitir
Degmada Vindeln iyo jawiga shirkadeeynta waxeey si wada jir ah uu soo saareen Aragtida Mustaqbaleed ee 2020: "Vindeln waa degmada goobaha-Umeå ugu fiican qooyska caruurta leh iyo shirkadleeyaha. Halkaan waxaan si wada jir ah uga abuureeynaa kobcin sii joogto ah oo la mideebsan bey'ad nololeed oo nabad ah, caafimaad leh iyo fikrado cusub."
Waan ku faraxsanahay jawigeena urureed ee balaaran. Halkaan waxaa ka jiro inta badana waxaa ka mid ah isboortiga, toliinka, tiyaatarka, sawirka iyo ururka heesaha. Balaarka dariis ayaa keeno in dadka badana helaan wax ee ayaga hami uu hayaan.
Ardayda ku jirto da'da iskuulka waxeey lee yihiin fursado ee ku helaan caawimaad-layli oo lagu siinaayo afkooda, masaafad-safareedna waxaa ku yaalo ururo kale ee jinsiyeed iyo diimeed, waxaa ka mid ah ururka Muslimiinta iswiidhishka ee Umeå.
Haddii aad dooneeyso in aad la kulanto asxaab cusub ee degan Vindeln waxaad ka qeeyb qaadan kartaa Vän i Vindeln. Markaasi waxaad heleeysaa saaxiib/saxiib-reered oo ka caawin karo in aad soo gasho bulshada.
Bartamaha bulshada raaxada leh ee Vindeln waxaa ka heleeysaa dhowr dukaamo, laga bilaabaa dharka iyo kobaha, ilaa biraha-, midabka iyo dukaamada dhisamaha. Waxaa jiro laba dukaan oo maalin kasto laga adeegan karo, ICA iyo Coop Konsum oo xataa gado hilib xalaal ah. Alaab guri iyo maacun rakhiis ah waxaa ka mid eh oo ka gadan kartaa Lions loppis iyo dukaanka-celinta Retrå ee degmaded. Xafiiska shaqada, qaabilaada qaxootiga iyo xafiiska bulshada waxey ku yaalin bartanka bulshada. Maktabada waxaa yaalo buugaag ku qoran luuqao badan oo kala duwan – haddii aad doneeyso wax gaar ah shaqaalaha ayaa uu furfuran in ee ku siyaan talo.
Vindeln waxeey masaafad-safared uu jirtaa Umeå oo leh bandhigid magaalo weeeyn ee xagga dukaamada, xafiiska canshuuraha, qasnada ceeymiska iyo hey'adda socdaalka iyo in kale.
Gudaha Vindeln waxaa laga helaa gobolkan rugtiisa caafimaadka. iyo daryeelka ilkaha ee dadweynaha. Dhanka daryeelka bukaanka ee deg-degga ah iyo daryeelka takhasuska ah waxaa lagula talinayaa Isbitaalka Jaamicada Norrland (NUS).
Markasto aad xariir la yeelaneeysid degmada ama hey'ad dowladeed waxaad adiga, oo ah qofka iswiidhiska uu san aheeyn afkiisa hooyo, waxaa xaq uu lee dahay turjumaan.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Vindeln